अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले देशको समग्र आर्थिक सूचकहरु स्वस्थकर रही देशको अर्थतन्त्र सही ‘ट्र्याक’मा अगाडि बढेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय समाचार समितिका लागि रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले अर्थमन्त्री डा खतिवडासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
वित्तीय परिसूचकमा देखिएका उतारचढावलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ रु स्थायित्व कायम राख्न कत्तिको कठिनाइ छ ?
समस्या त खरिद ऐन पनि रहे छ नि रु त्यसमा व्यावहारिक जटिलता पनि छ की ?
एक÷दुई वटा विवादहरु छन्, ती भनेका कानूनी विवाद हुन् । उदाहरणका लागि वनको कर, वन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छन् । त्यसो भएकाले वनको राजश्व सबै हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने स्वाभाविक सबैको दावी हो । त्यो भएर कानूनबाटै हामीले मिलाउनुपर्ने छ । सम्पत्ति कर स्थानीयलाई दिइएको छ । हाम्रा नगरपालिका यस्तो पनि छन्, जो खेतीयोग्य जमीन छन् । खेतीयोग्य जमीनको बीचमा घर बनाएर कोही बसेको छ । हेर्दाखेरी सम्पत्तिमा परिभाषित गरियो । नगरपालिकाले यो सम्पत्ति हो भन्छ, कृषक जो खेतमा बसेका छन् ऊ भन्छ, यो त खेती गरिरहेको जमीन हो । मालपोत तिर्नुपर्ने जमीन हो, कहाँ सम्पत्तिकर तिर्ने । दुवैका कुरा मिलाउनुपर्ने छ । यस्ता विवाद पनि अहिलेको बजेटबाट हामीले केही मिलायौँ । मूलतः मूल्याङ्कनमा समस्या छ । त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन कति गर्ने र जनतालाई कति कर लगाउने रु तिर्न सक्नेमात्र कर लगाउने हो नि रु त्यसो हुनाले सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र परिभाषामा केही मिलेको छैन । व्यक्तिको घरबहाल कर स्वतः स्थानीय तहले उठाउन पाउने कानून छ । तर, संस्थाले आफ्नो घरबहालमा दिएको छ भने त्यो आयकरमा जोडिन्छ जुन सङ्घमा छ ।
डुइङ बिजनेसमा हामीले यो वर्ष राम्रै गर्‍यौँ । हामीले जे गरेका छौँ । त्यसमा थप सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र छन् । हामीले अब कम्पनीको दर्ता प्रक्रियामा थप सरलीकरण गर्नुछ । कम्पनी बन्द गर्ने व्यवस्थालाई अझ राम्रो गर्नुछ । कम्पनीलाई जग्गा प्राप्ति, बिजुलीलगायत सुविधामा अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने छ । अब ठूला कम्पनीलाई लगानी बोर्डले त्यो सुविधा दिनुपर्ने छ । त्यसैगरी बैंक कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ सजिलो बनानुपर्ने छ । मूलतः पारदर्शी र कुशल व्यवसाय प्रशासन गर्न सक्नुपर्छ त्यो सबै गर्नका लागि अत्यधिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने छ । समग्रमा लगानीकर्ताले पहिलेभन्दा अहिले सहज भयो भन्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।
Published Date: Saturday, 11th January 17:50:20 PM